စကားများအရေးကြီးပုံ — ခရီးစဉ်လီ
စကားသည်အရေးကြီးလှသည်. ကျနော်တို့စကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုအသုံးပွုရ. ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်သွားရန်ငါတို့စကားကိုကိုသုံး. ငါအတူတူသီခငျြးမြားကိုထားနှင့်တစ်ဦးလူနေမှုအောင်စကားလုံးများကိုကိုသုံး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဆုံးမဖို့စကားလုံးများကိုကိုသုံး. နိုင်ငံရေးသမားတွေသူတို့အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေဖြင့်သင်တို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့စကားလုံးများကိုကိုသုံး. စကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသောရှုထောင့်တစ်ဦးကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်း. ငါအသစ်တခုသားများ. ခုနစျပါးပတ်အဟောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ခက်ဒါဟာင်, သူတို့စကားမပွောနိုငျသောကွောငျ့အဓိကအားဖြင့်. ဒါကြောင့်တခါတရံတွင်ငါသူ့ကိုကူညီချင်ပေမယ့်သူကသေးသောစကားနှင့်မဆက်သွယ်နိုင်သောကြောင့်, ဘယ်လိုမသိရပါဘူး. စကားသည်မပါဘဲတစ်ကမ္ဘာစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲဒါဟာင်.
ပျမ်းမျှလူတဦးအကြောင်းပြောပါတယ် 16,000 စကားနေ့က. ဒါကင် 112,000 စကားသည်အပတ်တိုင်း. ဒါကသန်းငါးကျော်စကားသည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရဲ့. ကျနော်တို့စကားသည်ကိုအသုံး. တစ်ဦးကအများကြီး.
ထိုအခါဘာမှအများကြီးမတန်တဆခံရဖို့ရှိပါတယ်စတင်ခဲ့သည်ရဲ့. ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ကအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ခုခုအပြောင်းအလဲများ၏တန်ဖိုး. ရှိပါတယ်သောအခါ, 100 သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ပြောနေတာကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ, ဝန်ဆောင်မှုပြီးစားပွဲပေါ် cookies တွေကို. သို့သော်ကိုသာအနည်းငယ် cookies များကိုရှိပါတယ်အခါ,, သူတို့အဘိုးထိုက်သောထင်ရ. သငျသညျအခြိနျမှာတစျခုအရဆိုပါကသင်ဖြစ်နိုင်ကျော်ရှိပါတယ်အလျင်စလိုနဲ့ပါလိမ့်မယ်, ကကိုက်တာခြိုဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်များစွာသောစကားကိုနားထောငျအသုံးပြုသောကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးမဆိုလိုဘူး. ငါတို့မူကားအဘိုးထိုက်သောအဖြစ်သူတို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်.
ဒီတစ်ခါလည်းကျနော်တို့ပွောဆိုမှသာတကယ်အရေးကြီးသောအရာများကိုသိသာထင်. ဒီတစ်ခါလည်းကျနော်တို့ချရေးကိုသာအဘယျအထင်, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်အုတ်မြစ်ချစကားပြောဆိုချက်တွေကိုရှိသည်တဲ့အခါမှသာသို့မဟုတ်ကျနော်တို့တကယ်ငါတို့စကားကိုအရေးထင်အဘယ်သို့ဆိုတဲ့အခါမှသာ. ကျနော်တို့ကျမ်းပိုဒ်ယနေ့ညအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အရာတစ်ခုခုဆက်သွယ်ထင်. မဿဲငါနှင့်အတူအလှည့် 12:36.
သို့သော်လည်းငါသည်ယောက်ျားသူတို့ပြောပြီတိုင်းမထီလေးစားပြုသောသူစကားလုံးများအတွက်တရားစီရငျ၏နေ့တွင်အကောင့်ပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုဆိုသညျကား. (မဿဲ 12:36)
ယရှေုသညျဖာရိရှဲတို့နှင့်အတူတစ်စကားလက်ဆုံအလယ်၌ဟောပြောသောဤစကားကိုမိန့်တော်မူ၏, သူတို့စာတန်နတ်ဆိုးများနှင်ထုတ်၏ကိုယ်တော်ကိုအပြစ်တင်ပြီးနောက်. ဒါကြောင့်သညျယရှေုအခြေခံအားဖြင့်သူတို့မကောင်းသောအနေသောသူတို့အားပြောထားပါသည်, ကောင်းသောဘာမှမပြောနိုင်ပါဘူး (သူစကားနှင့်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာလမ်းရှိပါတယ်). သူကငါတို့စကားကိုအပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏စိတ်နှလုံးအထဲ၌အမြစ်ယူမယ့်အရာ၏အသီးကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုပွောတယျ.
ပြီးတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုအဲဒီဗုံးကို drop. ဒါကကျနော်တို့စကားပြောကြတိုင်းမထီလေးစားပြုသောသူစကားလုံးများအတွက်ဘုရားသခင်အားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မည်. ဤသည်ဖာရိရှဲတို့မသာလျှောက်ထားပါဘူး. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတစ်ခုတည်းတစစ်မှန်တဲ့င်. ထိုအခါအောက်ပါကျမ်းပိုဒ် ပို. ပင်စိတ်လှုပ်ရှားထိတ်ဖြစ်ပါသည်. သူကပြောပါတယ်, "သင်တို့၏စကားအားဖြင့်သင်တို့သည်အပြစ်ပါလိမ့်မည်, နှင့်သင်၏စကားအားဖြင့်သင်တို့ကိုအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။ " ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? အဘယ်ကြောင့်ငါတို့စကားကိုဒါအရေးကြီးတယ်? အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ပြောပါဆိုသောစကားကိုကဲ့သို့အသေးအဖွဲအရာတစ်ခုခုအပေါ်အခြေခံပြီးတရားသေလွှတ်သို့မဟုတ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်?
သူကပြောပါတယ်လာသောအခါသူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစောပိုင်းကစေသည်, "စိတျနှလုံး၏လျတ်ထဲကနှုတ်ပြော၏။ " သငျသညျအစဉျအစီရငျခွငျးကိုမတရားခံစားခဲ့ဖူး? တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်အရူးခဲ့ကြသောအခါဆိုးနေ့၌သင်တို့ကိုဘမ်းနှင့်တနေ့ပေါ်တွင်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုဇာတ်ကောင်စစ်ကြောစီရင်လိုပဲ? ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားအားဖြင့်စစ်ကြောစီရင်ခံရလိုမဟုတ်ပါဘူး. စကားသည်ကျွန်တော်တို့ကို define ကြဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင့်တဦးတည်းရှုထောင့်များမှာတူဒါဟာမင့်. သူတို့ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတစ်ဦးတိကျမှန်ကန်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကြောင့်ကျနော်တို့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားအားဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါတယ်.
ဒါဟာငါသောက်သောခွက်ကိုကိုင်ပြီးတာပါနီးပါးတူရဲ့, သင်သည်ထိုအတွက်ဘာမသိရပါဘူး. ငါသည်ရေအဲဒီမှာ၌ရှိ၏သင်ပြောပြနိုင်, သို့မဟုတ်ဖျော်ရည်အဲဒီမှာ၌ရှိ၏. သို့သော်လျှင်ငါသောက်အချို့ကို trip နှင့်သုတျသို့မဟုတ်ဖိတ်, သငျသညျရှိရဲ့အတိအကျဘာကိုသိပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာငါတို့စကားကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုနှင့်တူညီသောင်. ငါတို့သည်စကားပြောကြတဲ့အခါမှာ, ငါတို့စိတ်နှလုံးကိုများ၏ content ထွက်ဖိတ်သည်. ငါတို့စကားကိုအမြဲငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ဘာကိုပြသ, ကောင်းသောသို့မဟုတ်မကောင်းသောအရှိမရှိ. ထိုအခါပေါလုသည် Tripp အဖြစ်, ငါသည်ဤရက်သတ္တပတ်ဖတ်ထားတဲ့စာရေးဆရာမ, ကပြောပါတယ်, "သင်သည်သင်၏အသက်တာ၌တစ်ဦးကြားနေစကားလုံးပြောပြီဖူးဘူး."
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားများအတွက် Accounts ကျင်းပ
တိုင်းယခုပြီးတော့တစ်စုံတစ်ဦးကိုသူတို့အများပြည်သူအတွက်ပြောဆိုကြပြီမယ်လို့ဘယ်တော့မှတစ်ခုခုဟုဆိုတိပ်အပေါ်ဖမ်းမိရလိမ့်မည်. သူကရုရှား၏နိုင်ငံတော်သမ္မတမှပြောနေတာခဲ့တဲ့အခါဒီသမ္မတအိုဘားမားမှဖြစ်ပျက်. ဤသည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Mitt Romney မှဖြစ်ပျက်. သူတို့ကအဲဒီစကားတွေအတွက်တာဝန်ခံကျင်းပခံရဖို့မမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမဲ့သူတို့ခဲ့ကြ. အလားတူပင်, ငါတို့သည်စကားပြောကြအချို့သောစကားသည်အတာဝန်ခံကျင်းပမည်မဟုတ်ပါထင်. ကျနော်တို့အမှုအရာလို့ပြောထင်, နှင့်ပြုသောအမှုပြဿနာရှိနေတတ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုက်မှပြန်လာကြလိမ့်မည်. ဘုရားသခင့အားလုံးဖန်ဆင်းခြင်းကျော်ကင်မရာများ hidden မူလျှင်ကြောင့်ဖွင့်.
တစျနေ့ရှိပါသည် - စာသားတရားစီရငျ၏နေ့ကခေါ်ဆို - ငါတို့သည်တစ်ခုလုံးကိုစကွဝဠာ၏သန့်ရှင်းသောတရားသူကြီးရှေ့မှာရပ်မည်သည့်အခါ. ထိုအကြှနျုပျတို့ပွုသညျ့အခါငါတို့စကားကိုမျက်မြင်သက်သေများအဖြစ်ရပ်နေမည် - သက်သေခံသည်ငါတို့အဘို့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ဖြစ်စေ. အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများတင်ပြပါလိမ့်မည်.
ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကလေးတစ်ဦးနှင့်ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်လူကြီးတွေဟာအဲဒီမှာရှိတယ်အားဟောပြောသည်လမ်းအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့၏မိဘများအားမိန့်တော်မူသည်လမ်းမှာကြည့်ရှုမည်. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့သလမ်းပေါ်မှာတကျွန်းသူအားမိန့်တော်မူရာလမ်းကိုဆနျးစစျလိမျ့မညျ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပူးတွဲလုပ်သားများမှသို့ပြောသည်အပြက်လုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိမ့်မည်. ဘုရားသခငျသညျအလုပ်မလုပ်ဖို့ drive ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ၌အကြှနျုပျတို့၏အမျက်ထွက် rants မှတဆင့်ဖြီးပါလိမ့်မယ်. သူကပင်ကျွန်တော် Facebook နှင့် Twitter ပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်သောအရာကိုတဆင့် scroll လိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ကစာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များကိုပေးပို့တောင်မှထိုစကား. တိုင်းတစ်ခုတည်းစကားလုံး.
သငျသညျယရှေုကိုကျနော်တို့စကားပြောကြအရေးကြီးသောဤစကားသည်အ account တစ်ခုပေးဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုမဆိုပေသတိထားမိမှာ. သူကပြောပါတယ်, "ခပ်သိမ်းသောသတိမရှိသောစကားလုံး။ " အတွက်အသုံးပြုသောစကားလုံး ပေါ့လြော့သော လည်းပျင်းရိသို့မဟုတ်အသုံးမကျအဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်. တိုင်းစကားလုံး, သငျသညျကထင်ပုံကိုအရေးမနေပါစေ. ကြှနျုပျတို့သညျဤနံနက်အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအဆိုပါ All- သိ. ဘုရားသခငျသညျ, ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ပြောပြီင့်တိုင်းစကားလုံးသိတယ်.
ဒီမှာအရာပါပဲ. ရုံတစျခုသောသူတို့သည်အဓမ္မစကားလုံးကိုအပြစ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်. သင်တန်းနည်းလမ်း၏ဘယ်, ကြှနျုပျတို့အားလုံးငါတို့စကားကိုအဘို့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသင့်ပါတယ်.
ကောင်းပြီသုံးစကားသည်ရှိပါတယ်, သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြုတတ်ကြ၏, ကြောင်းအစဉ်အမြဲငါပြောပြီင့်တိုင်းမထီလေးစားပြုသောသူစကားလုံးပယ်ဖျက်အစားထိုး. ထိုသုံးစကားသည် "ဒါဟာများမှာ. ဖြစ်. ကိုလက်စသတ်။ "ဟုအဆိုပါစုံလင်သောအသက်တာကိုအသက်ရှင်ခဲ့ပွီးနောကျ, ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနေတဲ့လမ်းအတွက်သူ၏စကားကိုသာအသုံးပြုပြီးလျှင်ပြီးနောက်, ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်သွားကြ၏. ထိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ချိတ်ဆွဲရသောအခါ, သူတောင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန့်ခွန်း၏အပြစ်ကြောင့်အသေ. ထိုသုံးရက်အကြာတွင်မြင့်တက်.
ခရစ်တော်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတင်တဲ့သူကိုသူတို့အဘို့, ဟုတ်ကဲ့, ခရစ်တော်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအသီးနေသောငါတို့သည်ပြောပြီင့်ကတည်ဆောက်စကားသည်ရှိပါတယ်. ထိုစကားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာသာအတွက်သက်သေခံမည်. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲအပေါငျးတို့သညျအခွားစကားအားဖြင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်. ထိုအခါသခင်ယေရှု၏အသွေးအဲဒီစကားကိုဖုံးသောဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါ. သငျသညျယရှေုကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, သင်၏အပြစ်များအားလုံးအတှကျသငျသညျလွှတ်နိုင်သူကိုတစ်ဦးတည်းသာရှိသင်၏အပြစ်များနှင့်ယုံကြည်မှုကနေလွှဲ, သင့်ရဲ့မိန့်ခွန်း၏ဒုစရိုက်အပြစ်တို့ကိုအပါအဝင်.
ယုံကြည်သူများသည်အတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားသည်အအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ဆဲသောသူတို့အဘို့တာဝန်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ်. ကျနော်တို့ဆဲသောသူတို့အဘို့ဘုရားသခငျအားဖြေဆိုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံအတွက်ဆုလာဘ်ကိုဆုံးရှုံးနိုင်.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေနှင့်အလွန်သတိပြု. ကျနော်တို့ဘတ်ဂျက်လုပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်နဲ့ဟန်ချက်ညီ, ငါတို့သည်ငါတို့၏လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းငွေတောင်းခံထုတ်ပြန်ချက်များမှာကြည့်ရှု. ကျွန်တော်တစ်ဦးတွေအများကြီးရှယ်ယာမှာဖြစ်ပါတယ်သိသောကြောင့်. ကျနော်တို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံ Stewards ရန်ရှိသည်ကိုသိ.
ကောင်းပြီသတိပြု၏တူညီသောမျိုးကို, နှင့်တွက်ချက်မှုကျွန်တော်ငါတို့စကားကိုအသုံးပြုလမ်းမှလျှောက်ထားရပါမည်. အများကြီးရှယ်ယာမှာသောကြောင့်,. ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏စကားသည်အသီးအသီးအဘို့ဘုရားသခငျအားပြန်ပြောမည်. ကျနော်တို့သုံးတဲ့စကားလုံးများ၏ဘဏ္ဍာစိုးကောင်းဖြစ်သင့်.
ငါတို့စကားကိုသံတူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့မဆငျမခွန်းကျင်ကသူတို့ကိုလွှဲခြင်းနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယကိုချိုးဖျက်နိုင်. ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပစ္စယတည်ဆောက်ဂရုတစိုက်သူတို့ကိုအသုံးပွုနိုငျ. သင်ဘယ်လိုယခုအပတ်သင်၏စကားကိုသုံးပါလိမ့်မယ်? ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤအတိတ်ရက်သတ္တပတ်ငါတို့စကားကိုအသုံးပြုဖြစ်နိုင်ကြှနျုပျတို့သညျဤလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းသူတို့ကိုအသုံးပွုနိုငျပုံကိုပြပါလိမ့်မယ်, တစ်ခုခုအပြောင်းအလဲများမဟုတ်လျှင်.
၏ 16,000 စကားသည်ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကိုသုံး, ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နှင့်အတူစကားလက်ဆုံရှိသူတို့အများအပြားသုံးစွဲဖို့ပညာရှိဖြစ်လိမ့်မယ်. ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုခမည်းတော်ထံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတော်မူပြီ, ကျွန်တော်မကြာခဏသူ၏ရာဇပလ္လင်တော်ရှေ့မှာရဲရဲဝံ့ဝံ့လာသင့်တယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်းသောနားဆင်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိစေခြင်းငှါ, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်မ. သူကအမြဲကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးနား ထောင်.. တကယ်တော့, သူကအရမ်းနီးနီးကပ်ကပ်စကားကိုနားထောငျ.
မကြာခဏဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုခုကတဆင့်သွားနေရသောအခါ, ကြှနျုပျတို့ပွုပထမဦးဆုံးအရာပဲမိသားစု၏မိတ်ဆွေများမှဒေါသထွက်မှုများသည်. ဒါမှမဟုတ်ကျနော်တို့ကိုယျ့ကိုယျကိုမှကျယ်လောင်သောကအကြောင်းထုတ် rant. အဘယျသို့စကားများနေတဲ့စွန့်ပစ်. ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကပဲ, ကိုယ့်ကိုတကယ်ငါ့ကိုအနှောက်အယှက်ခဲ့ကွောငျးအရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုငါ့ဇနီးမှညည်းညူခဲ့နဲ့ကျွန်မအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့. ထိုအဆိုဆုံးမစကားကိုသဘောတူသို့မဟုတ်ရာပူဇော်သက္ကာကိုရှေ့တော်၌, သူမပဲရိုးရိုးငါ့ကိုမေးတယ်, "သင်ကအကြောင်းဆုတောငျးလကျြဖူး?"ထိုအဖြေကိုအဘယ်သူမျှမခဲ့. ငါကအကြောင်းဘုရားသခင်အားပြောနေတာခဲ့ကြသင့်တယ်. ဒါကငါ့စကားတစ်ဝေးပိုကောင်းအသုံးပြုမှုကြပြီ.
မကြာခဏဖော်ထုတ်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့ကို madder လုပ်ထက်ပိုဘာမှမပါဘူး. ဒါဟာတခါတရံစကားများနေတဲ့စွန့်ပစ်မယ့်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကစကားပြောစကားများနေတဲ့စွန့်ပစ်တော့မှဖြစ်ပါသည်. သင်၏စကားမျှပိုမိုကောင်းမွန်အသုံးရှိပါတယ်. ကျနော်တို့ထိန်းချုပ်ထဲမှာမနေ, ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုအပ်လာသောအခါ, အစားမယ့်အရူးဖြစ်ခြင်း၏, ကျနော်တို့တာဝန်ခံရဲ့အဘယ်သူတစ်ဦးမှစကားပြောသင့်တယ်. ထိုသို့ငါတို့အဘို့အနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေဘို့ကောင်းပါတယ်လျှင်, သူကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုပေးသနားတော်မူလိမ့်မည်.
ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်စေခြင်းငှါ. အကြှနျုပျတို့သသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူပြဿနာများကိုတဲ့အခါ, ကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရန်ညာဘက်လူတစ်ဦးမှသွား. ကျနော်တို့အခြေအနေအကြောင်းဘုရားသခင်အားပြောနေတာကအခြားလူတစ်ဦးမှပြောနေတာထက်ပိုမိုအရေးကြီးသောနှင့်ထိရောက်သောကြောင်းသတိရသင့်တယ်. သင်ကတခြားသူတစ်ဦးမှစကားပြောရှေ့၌သင်တို့ relational ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. ဘုရားသခင့စကားပြော. အကူအညီနှငျ့ကျေးဇူးတော်နှင့်ပညာသည်ကိုယ်တော်ကိုမေးကြည့်ပါ. သငျသညျသမ္မာသတိရှိကြလော့ရန်သင်၏ဖန်ဆင်းရှင်မှပြောနေတာ၏အလေးချိန် Allow နှင့်သင်ပိုမိုရှင်းလင်းစွာထင်ကူညီ.
အကြှနျုပျတို့ပစ္စည်းပစ္စယအတှကျဘုရားသခငျကိုမေးမှငါတို့စကားကိုအသုံးပြုသင့်မသာ. ကျွန်တော်နင်္ဂနွေနေ့တိုင်းနံနက်ချီးမွမ်းခြင်းကိုတစ်ဦးဆုတောင်းပဌနာများအဘယ်ကြောင့်ဤသူကား. ကျနော်တို့သူ့ကိုအချို့သောကြိမ်ကိုခြီးမှမျးသငျ့တယျ. ကျနော်တို့ကသူ့ထောမနာသီချင်းဆိုမှထူးခြားသောအကျင့်တို့နှင့်ချီလာမယ့်သင့်ပါတယ်. ကိုယ့်ထက်ပို, "သူသည်ကောင်း. သငျသညျဘုရားသခငျသညျကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "ဘုရားသခင်အဘို့မေတ္တာနှင့်ပြည့်နှက်ကြောင်းအဆိုပါနှလုံးနေ့တိုင်းနည်းလမ်းအသစ်များကိုနှငျ့ဘုရားသခငျကိုခြီးမှမျးသစ်ကိုအကြောင်းပြချက်တွေ့ရှိ. သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်ပေ၏.
II ကို. ဧဝံကိုပြောပြပါ
ငါနောက်ထပ်လူတစ်ဦးအားပြောပြရန်ပိုကောင်းဘာမှစဉ်းစားမနိုင်, ဧဝံထက်. ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားတော်ယေရှုကိုခရစ်တော်အားဖြင့်ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌အမိန့်တော်ရှိ၏. အကြှနျုပျတို့ကိုယ်တော်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူပြုသောအမှုဖွင်အကြောင်းတခြားသူတွေကိုပြောပြသင့်တယ်.
ရောမ 10 ကိုကိုပြောတယ်, "ယုံကြည်ခြင်းကြားနာခြင်းနှင့်ခရစ်တော်၏တရားစကားတျောကိုတဆင့်နားကြားတဆင့်လာပါတယ်။ " ဤသည်ဘုရားသခင့ယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုကယ်တင်ပုံ. သူတို့ဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောငျတျောနှင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လက်ခံလာတဲ့အခါ.
ငါသည်သင်တို့ကိုဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောငျတျောရန်လိုအပ်သည်သင်၏အသက်တာ၌အဘယျသူတစ်ဦးအကြောင်းကိုခဏစဉ်းစားရန်လိုခငျြ. ဒါကြောင့်မိသားစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, အိမ်နီးချင်း, တစ်ဦးဆံ, ဆရာဝန်တစ်ဦး? သင်၏အသက်တာ၌အဘယျသူတစ်ဦးဧဝံဂေလိတရားကိုနားထောငျလိုအပျ?
အကြှနျုပျတို့ကို non-ခရစ်ယာန်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဆက်ဆံရေးနှင့်ဘုံမြေပြင်ဆောက်လုပ်ဖို့ငါတို့စကားကိုအသုံးပြုစေလိုသည်ကောင်းပါတယ်. သူတို့ကိုသိရန်အဘို့အဒါဟာကောင်းပါတယ်သူတို့ကိုသင်ဂရုစိုက်. ကျနော်တို့ကတကယ်တော့သူတို့နှင့်အတူဧဝံဂေလိတရားကိုဝေမျှဖို့ပတ်ပတ်လည်ရဘယ်တော့မှလျှင်သို့သော်ထိုသို့ကြီးကျယ်င်. ကျွန်တော်တို့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအကြီးအကျယ်ဖြစ်လိမ့်မယ် 10 နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်. စကားပြောဆိုချက်, ဒါပေမယ့်မတဧဝံဂေလိတရားအကြောင်း. ကျွန်တော်တို့အားကစားအကြောင်းအပတ်စဉ်ထုတ်စာတွဲများကိုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအကြီးအကျယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ယေရှုအကြောင်းမဆိုစကားပြောဆိုချက်မရှိခဲ့ဘူး. ထိုအခါငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုပြောနေတာ.
မကြာသေးမီက, ငါမိသားစုဝင်တွေသေဆုံးခဲ့. ထိုဖြစ်ပျက်အခါတိုင်း, ငါ့ကိုသတိပေး, အချို့သောကြိမ်ကစောင့်ဆိုင်းဖို့ကောင်းပါတယ်, သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံငါအခုအချိန်မှာယေရှုအကြောင်းရှေးရှေးပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ်. ငါသည်ငါ၏နာခံမှုညျဘုရားသခငျ၏အစီအစဉ်ကိုဖျက်မနိုင်ကိုသိ, ဒါပေမယ့်ငါနားမထောင်ဖြစ်သင့်မဆိုလိုပေ. ထိုလူအပေါင်းတို့အားဖွငျ့, ဝိညာဉ်တော်၏လမ်းပြအတိုင်းလိုက်နာ, ဒါပေမဲ့သူကယခုကပြောပါတယ်ခံရဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းပစ္စယကိုချွတ်ပယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ဘယ်တော့မှသင်သိရ. ဧဝံကိုပြောပြပါ.
ဤသည်က Non-ခရစ်ယာန်တွေကိုအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့သာအပြန်အလှန်ဖြစ်သင့်မဆိုလိုပေ. ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဖြစ်ပျက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဆိုလိုတာ. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုမှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ကြနှင့်ကအကြောင်းကိုပြောပြရန် pad ပါရန်စတင်အဖြစ်တရားဒေသနာကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်. ဒီတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုအကြောင်းပြောသွားကြောင်းကောင်းတစ်ဦးစာအုပ်သို့မဟုတ် cd မှသူတို့ကိုထောက်ပြ (အဟမ်း, သတ္တုတွင်း). ဧဝံဂေလိတရားကိုပြောပြရန်တစ်လမ်းကိုရှာပါ.
III ကို. အခြားသူများ Up ကိုတညျဆောကျ (က G- ကြေးဇူး)
မည်သည့်အကုသိုလ်ဆွေးနွေးချက်ကိုသင့်ခံတွင်းထဲကလာမခံပါနဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရသိရသည်အခြားသူများကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်သာအဘယျသို့, ဒါကြောင့်နားမထောငျသောသူတို့အားအကျိုးခံစားရရှိစေခြင်းငှါ. (ဧဖက် 4:29)
ဒါကအခြားလူမျိုးကိုငါတို့စကားကိုများအတွက်ခြုံငုံလမ်းညွှန်မူအရဖြစ်သင့်. အခြားသူများကိုတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးဝင်သည်သာလျှင်အဘယျသို့. ငါအစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့သည်လိုပဲ, ငါတို့စကားကိုသံတူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏. ကျနော်တို့ပစ္စည်းပစ္စယကိုချိုးဖျက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းပစ္စယညျဆောကျနိုငျ. နှင့်အခြားသူများကိုတည်ဆောက်ခြင်းငှါနည်းလမ်းတန်ချိန်ရှိပါတယ်.
ယရှေုသညျလူကိုမုန့်တစ်ဦးတည်းကိုပယ်နထေိုငျမဟုတျကွောငျးကိုဖျောပွ, ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်အထံမှထွက် လာ. ကားတိုင်းစကားလုံး. ဘုရားသခင့အဖိုးတန်စကားသည်အမိန့်တော်ရှိ၏. အကြှနျုပျတို့အသီးအသီးအခြားငါတို့သည်ရတိုင်းအခွင့်အလမ်းသောသူတို့သည်အဖိုးတန်စကားသည်ဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ်နေရပါမည်.
တလမ်းတည်းအားပေးမှုကိုဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ဤအတော်လေးကောင်းစွာ CHBC တတ်အရာတစ်ခုခုသည်ထင်. ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးလာသောအခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ကိုယ်ရံတော်ချွတ်ငါနှင့်ငါ့ဇနီးဖမ်းမိ. "သူတို့ပဲငါမေးသော်ထိုမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်. အကြှနျုပျအားပေးခဲ့?"ဒီအားပေးမှုအောက်မှာ Up ကိုကတိသစ္စာပြုသည်. အခြားသူများကိုအတည်ပြု. သင်သည်သူတို့၏အသက်တာ၌ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏အထောက်အထားများကိုမြင်သောအခါသူတို့ကိုပြောပြပါ. ထိုသူတို့အဘို့သင်၏မေတ္တာအတည်ပြု. ထိုသူတို့အဘို့ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်ကိုအတည်ပြု.
အခြားသောနည်းလမ်းဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်စိန်ခေါ်သည်. ကြှနျုပျတို့သညျ "ဆော" မစဉ်းစားသင့်တယ်ချစ်စရာကဲ့သို့တူညီသောဆိုလိုသည်, တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးအသံစကားလုံးမြား. တခါတရံဆုံးမသောတူရူပဆော, သို့မဟုတ်ဆုံးမခြင်း. တစျခါတကအပြစ်တရား၏နောင်တရရန်ညီအစ်ကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ်အစ်မစိန်ခေါ်နှင့်သူတို့တောင်းဆိုတူ. ကောင်းသောကြိမ်နှင့်ကြမ်းတမ်းသောအဆအားဖြင့်အသီးအသီးအခြားနှင့်အတူသွားလာရန် - ဤကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အသီးအသီးအခြားတစ်ဦးကတိကဝတ်ကိုဖန်ဆင်းထားသောအရာတစျခုဖွစျသညျ.
အကြှနျုပျတို့အခုအချိန်မှာတစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ်နထောင်လွှားသောအချိန်အားဖြင့်တော့မယ်ခံရဖို့ဖြစ်ပျက်. အကြှနျုပျတို့အားပေးမှုနဲ့စိန်ခေါ်မှုစကားသည်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ပါတယ်. ဧဝံဂေလိတရားကိုသင်၌ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေအားပေးပါ. ဘုရားသခငျ့အချုပ်အခြာအာဏာသူတို့ကိုသတိပေးပါနှင့်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်သူ၏ကတိတော်. ပြီးတော့လည်းယုံကြည်ခြင်း၏ကောင်းသောရန်ပွဲကိုတိုက်ရန်သင်၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မကိုစိန်ခေါ်, ယရှေုသညျကိုးစား၌စှဲမွဲဖို့. ကျနော်တို့လိုအပ်ပါတယ်.
သငျသညျအခွားသူမြားထကျတညျဆောကျနိုငျတဲ့နောကျနညျးလမျးကောင်းသောဆုံးမစကားကိုပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်. အများဆုံးရင့်ကျက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများအထီးကျန်မှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြပါဘူးသောသူဖြစ်ကြ၏. သင်၏အစ်ကိုသို့မဟုတ်အစ်မရဲ့အသက်တာ၌ပေါ်သွားအဘယျသို့အကြောင်းကြားရရှိနိုင် Be. ထိုအခါသူတို့ကိုဘုရားသခင်သည်သူတို့အားတုံ့ပွနျကွရှိသည်မယ်လို့ဘယ်လောက်အားဖြင့်ထင်ကူညီ. ထိုအသမ္မာကျမ်းအကွံဉာဏျပေး.
အခြားတဖက်တွင်မူ, ဘုရားကျောင်းအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးရာစကားပြောဆိုချက်ရှိခြင်းမှာများစွာသောအလုပ်အကိုင်အလုပျ. သို့သော်ငြားလည်း, ယေရှုထက်အခြားအမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်ကြောက်လန့်မဖြစ်သင့်ပါဘူး. ကျနော်တို့ဘဝအကြောင်းကိုပြောပြနိုင်, ကျွန်တော်အားကစားအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်, ဘုရားသခင့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတဲ့လမ်းအတွက်ကန့်ပြုပါ.
သငျသညျအခြို့ကိုတာပြောနေတာကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်အခြားသူများထက်ပိုပြောနေတာစတင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကနားထောငျတျောမှမြန်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကဆိုစကားသည်လုံးဝအသုံး. ထိုအခါငါတို့သည် သာ. ပြုပါရန်လိုအပ်ပါတယ်. တက်ဆင့်ဆိုရမည်. ဘုရားသခင်သည်သင်၏အသက်တာ၌အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းကြားချင်. အားလုံးသင်၏စကားမေတ္တာအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပါစေ. ကြှနျုပျ၏ပဌနာ CHBC ညျမတ်ေတာစကားအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဟာဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျသငျသညျယနေ့ညကြားဖူးတယ်အဘယျသို့လျှောက်ထားရန်ရှာခြင်းငှါအဖြစ်, ပဲသငျသညျအဘယျသို့ပွောဆိုခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေရုံပိုကောင်းလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေ၏အမှားလုပ်ဘူး. ရုံသာပြင်ပပေါ်မှာဤကိုင်တွယ်မနေပါနဲ့.
ကျနော်တို့စာသားထဲမှာအစောပိုင်းကမြင်သည်အတိုင်း, အဘယျသို့ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌သိုထားရဲ့ထွက်ကြွလာ. ကျနော်တို့ကနှလုံးနှင့်လျှာအကြားတစ်ဦးဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်လည်းမရှိမစဉ်းစားသင့်တယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့နှလုံး၌ကောင်းသောအမှုအရာသိုထားသူတို့နှင့်လျတ်စောင့်ကြည့်. အကြှနျုပျတို့ကိုပြုသည့်အခါ, ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငါတို့စကားကိုသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏ရပါမည်ပုံ.
သူတို့ထို့ကြောင့်အနီးကပ်ချိတ်ဆက်နေသောကြောင့်သင်၏စကားစောင့်ကြည့်ဖို့အစစ်အမှန်လမ်းသောသင်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. လျှာမှနှလုံးထဲကတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်လိုင်းရှိပါတယ်. သငျ့နှလုံး Watch, နှင့်လုပ်နေသဖြင့်, သင့်ရဲ့စကားစောင့်ကြည့်. ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ဒီသမျှအတိုင်းပြု.
francismewa • နိုဝင်ဘာလ 22, 2014 တွင် 3:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
manicle • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2015 တွင် 3:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
muskan • အောက်တိုဘာလ 24, 2015 တွင် 9:22 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Rita • နိုဝင်ဘာလ 4, 2015 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Barbara • ဖေဖေါ်ဝါရီလ 5, 2016 တွင် 6:03 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဖေါ်ပြ: Words are at least half the human reality if not the most
ဖေါ်ပြ: 2016 In Review – My Job Hunting Experience | The SharePoint Effect
ဖေါ်ပြ: စကားလုံးမြား – Banana Wifey